March 12, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'March 12th, 2017'
March 12, 2017 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta ku dhawaaqay maalin uu ugu magacdaray maalinta alle-bariga iyo Roob-doonka. Madaxweynaha ayaa maanta kulan la qaatay Guddiga Qaranka ee Gurmadka Abaaraha iyo Culumada Soomaaliyeed, waxana uu sheegay in loo baahanyahay in dadka Soomaaliyeed ay laabta isu furaan si Eebe uga …
Kulankii Gurmadka Abaaraha Dalka (VIDEO)
Madaxweynaha ayaa maanta kulan la qaatay Guddiga Qaranka ee Gurmadka Abaaraha iyo Culumada Soomaaliyeed, waxana uu sheegay in loo baahanyahay in dadka Soomaaliyeed ay laabta isu furaan si Eebe uga dulqaado colaadaha iyo abaaraha ku habsadey. Madaxweynaha ayaa ka codsaday ganacsatada, haweenka, dhallinyarada iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada inay ka qeyb qaataan gurmadka …
March 12, 2017 – Agaasimaha Telefishinka Universal ee Bariga & Bartamaha Afrika C/laahi Xersi Kulmiye ayaa maanta ka hadlay qaraxii saakay loogaystay Suxuufi C/xamiid Maxamed Karasaay, qaraxaasi oo ahaa mid gaarigiisa loogu soo xiray. Agaasimaha ayaa tilmaamay in qaraxan gaariga xalay lagu soo xiray, saakayna uu C/xamiid kula qarxay agagaarka Masaajidka Marwaas ee Degmada Xamar …
Gaarigii Qaraxa Lagu Xiray ee Karasaay (VIDEO)
Agaasimaha ayaa tilmaamay in qaraxan gaariga xalay lagu soo xiray, saakayna uu C/xamiid kula qarxay agagaarka Masaajidka Marwaas ee Degmada Xamar Weyne. Kulmiye oo la weydiiyay su’aal ahayd cidda qaraxan ku soo xirtay gaariga C/xamiid Karasaay, ayaa ku gaabsaday, sheegayna in ciidamada ammaanka ay wadaan baaritaano la xiriira qaraxaasi, isla-markaana aanay illaa iyo hadda haynin …
March 12, 2017 – Waxaa maanta Qaybo kamid ah wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho xiray Ciidamo aad u hubeysan oo la sheegay inay katirsan milatariga Soomaaliya, kuwaasi oo tabanaya daryeel la’aan. Ciidankani wadooyinka la wareegay ayaa gaadiidka kala duwan u diiday inay maraan wadooyinka iyagu ay xirteen. Sida wararka aanu ku heleyno ayaa sheegaya …
March 12, 2017 – Ururka Al Shabaab ayaa biyo dhaamin ka bilaawday qaar kamid ah deegaanada ay ka taliyaan oo ay abaaraha darani saameeyeen, sida deegaanada ku xeeran magaalada xaradheere. Hogaanka Al Shabaab ee gobolka Mudug ayaa bilaabay in biyo dhaamin u sameeyaan dadka ku dhaqan deegaanada miyiga ay saameeyeen abaaraha xoogan ee dalka ka …
Wariye Cabdi Xamiid Karazaay oo Maanta ku Dhaawacmay Qarx Loogu Xiray Gaarigiisa (SAWIRRO)
March 12, 2017 – Kharaxii saakay ka dhacay Degmada Xamar weyne ee Gobolka Banaadir ayaa la sheegayaa inuu ahaa mid lagu xiray gaari nooca raaxadda ah oo halkaasi maraayay. Gaarigan ayaa ahaa mid uu watay Suxufi ka tirsan Tv-ga Universal oo lagu magacaabo Cabdi Xamiid Karazaay, kaasi oo marayay nawaaxiga Masaajidka Marwaaz ee degmeda Xamarweyne markii …
Ra´iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo soo Rogay Amaro Cusub (Akhriso)
March 12, 2017 – Ra’iisulwasaaraha dhawaan la magacaabay ee Soomaaliya mudane, Xasan Cali Kheyre ayaa soo rogay amar lagu joojinayo dhismayaasha ka socda Nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde International. Warqad kasoo baxday Xafiiska Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya ayaa lagu amray in la Joojiyo wixii dhisme ah ee ka socda gudaha ama hareeraha garoonka Diyaaradaha, Waxaana amarkani …